Malunga nathi - Changzhou Sdpac Co., Ltd.
Changzhou Sdpac Co., Ltd.ise-C5, HUTANG inzululwazi kunye neTeknoloji Industrial Park, Guangdian East Road, Changzhou City, kunye nommandla phantse 10000 m2.
"Jonga ikamva, yenza kuphela ipheyile"yifilosofi yethu yeshishini.
I-Changzhou SDPAC Co., Ltd. iya kwenza uthotho lweeplastikhi ezikumgangatho ophezulu zase-US ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abaphezulu. Ngophuhliso lwezixhobo kunye nemveliso ekrwada kwimarike yasekhaya, iindleko zokupakisha zinokuphuculwa. Ukupakisha ipheyile kudlala indima ebalulekileyo ekwandiseni ixabiso langaphandle elongeziweyo leemveliso. Njengophawu lokupakisha okuphezulu, iipilisi zeplastiki zihlala ziguqula ipateni yeepakethe zokupakisha kwintengiso. Sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba ikamva leepilisi zeplastiki kukuyila okuguqukayo, kwaye kubonakalise ngokupheleleyo ixesha lemveliso ebhalwe igama lakho.
Inkampani yethu ihlala ibeka ukhuseleko kwindalo esingqongileyo kwindawo ebalulekileyo kwisicwangciso sophuhliso lweshishini. Ngelixa ibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo kubathengi, inkampani izibophelele kukhuseleko lwendalo ukuphumeza uzinzo. Siza kudibanisa ulawulo lokusingqongileyo kunye nolawulo lweshishini, kwaye ngokuthe ngcembe simisele kwaye siphucule umbutho kunye nendlela yokusebenza yolawulo lokusingqongileyo. Ukukhathalela umhlaba esihlala kuwo, ukunciphisa ukukhutshwa okungcolisayo kunye namandla okusindisa ziinjongo zethu zanaphakade.
2010 YENZA IOPILE YOKUGQIBELA A YOKUFUNDA NOKUFUNDISA IIPELA ZOTHOQO
2011 YENZA IBHAYIBHILE YOKUGQIBELA YOKUFUNDA
2012 UPHUHLISE ZONKE IIPlastiki
2013 YENZA INDAWO YOKUJIKELELA NGOKUQHELEKILEYO
2014 YENZA IZITYA
2015 QHUBA UKUVULA ISIKHOKELO NEGAMMA LID
2016 UKUQHUBA IPOLO YOKUGQIBELA YOKUFUNDA
2017 YENZA IIPILILI ZOKUJIKELELA D YOKUFUNDA
2018 UKUPHUHLISA I-PASTE YENKCUKACHA YENKONZO
2019 YENZA IIPARIKI ZEplastiki kunye neepeyinti zebhasi
2020 YENZA IIPILILI ZOKUSULA